Makasaoka - recette de Makasaoka - Mofo makasaoka
par Gaël RAKOTOVAO	 19 avril 2016
Makasaoka (beignet sucrée) izay tsara atao sakafo maraina ampiarahina amin’ny dite na cafe.
Fotoana iketrehana azy : 15mn
Tetehina fisaka tsy manify loatra ny mofo.
Omanina ny pate: afangaro ny 1 jaune d’oeuf sy 4 càs sucre sy 200 g de farine sy 1/2 tasse d’eau.
Kapohana en neige mitokana kosa ny 1 blanc d’oeuf vao afangaro amin’ny pate (astuce maha-moelleux ny beignets no tsy mampitroka menaka).
Ampandalovana pate ny mofo, atao vonto tsara. Avela hilona kely 2mn dia endasina. Tsy mila menaka be.
recette de beignet malagasy, recette de beignet sucrée, recette de makasaoka, sakafo maraina malagasy, traiteur malgache
Article précédent : Gâteau caramélisé aux pommes
Tsa-tsiou gasyArticle suivant :